SHOPIFY - Facebook pixel တပ်ဆင်ခြင်း
Posted by ကို Tranquillus | AVR 26, 2021 | web ပေါ်မှာ
သင့်မှာဆိုင်ရှိတယ် Shopify ? ယခုမှာသင်သည်ချင်တယ်ပိုပြီးရောင်းရန်သင့်အသွားအလာတိုးမြှင့် ?
ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုက၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာ။ သို့သော်၎င်းအတွက်သင်၏ဖန်တီးမှုကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အရောင်းခြေရာခံ နှင့်သင့်စတိုးဆိုင်တွင်မှန်ကန်စွာပေါင်းစပ်။ ဒီ pixel ကသင့်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မယ် ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ဝယ်ယူလုပ်ရပ်များစီမံခန့်ခွဲ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေမှာသုံးပါ။
သင်၏ Shopify တွင် Facebook pixel ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်းဤသင်ခန်းစာ၏အစီအစဉ်တွင်။
Ce ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်, ခြေလှမ်းမှခြေလှမ်း,
Facebook pixel ၏တည်ရှိမှုကိုစစ်ဆေးပါ၊ သင့် Shopify စတိုးတွင်မှန်မှန်ကန်ကန်တပ်ဆင်ပါ၊ ယူရိုမည်သည့်အသုံးစရိတ်များမဆိုအသုံးမပြုမီ pixel ၏မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။
Un MCQ သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်သင့်အားကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည် အသိပညာ validate သီအိုရီသင်တန်းကာလအတွင်းရရှိခဲ့သည်။
ငါအတွက်ရရှိနိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည် နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေး Lounge ဤသင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်။
နောက်ထပ်သွားရန် Shopify, ငါသည်လည်းပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ရေးကိုကမ်းလှမ်း: Shopify: E-Commerce site တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ Tuto.com ပရိုဖိုင်မှအခမဲ့ဖြစ်သောအချို့သောကျွန်ုပ်၏သင်တန်းများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်
SHOPIFY - Facebook pixel တပ်ဆင်ခြင်း အောက်တိုဘာ 15, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် sauvTage- အသက်အရွယ်တိုင်းတွင် အသက်ကို ကယ်တင်ရန် သင်ယူခြင်း။
လွန်ခဲ့သောလုပ်ခအပါအ ၀ င်၊
ကုမ္ပဏီတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြန်လည်ပညာသင်ကြားရေး သဘောတူညီချက်